Microstation V8i: Hagaajinta Hawlaha - Geofumadas
Maarso, 2009 tabo cusub, Microstation-Bentley
The ugu cusub baan u arkay, iyo shimbir in Microstation V8i waa bar navigation yaqaan sida Task Navigation runtii siinayaa waji cusub in maamulka iyo suurto gal diri amarrada in dib loo warshadeeyo muhiimka ah ee.
Sababtoo ah bar
Barnaamijyada CAD-du waxay leeyihiin waxyaabo ay ka mid yihiin kumanaan amarro ah, kuwaas oo si farxad leh u riyaaqay kuwa jahaaday timo cawl laakiin in xadka ay tahay in jihada loo isticmaalo qalabka barnaamijka aan loo baahnayn in la ogaado amarrada qoraalka.
Waayo, Microstation, amarrada via-muhiim ah ka ah ayaa si tartiib tartiib ah baaba la badhamada laakiin dhibaatada waa in ay ku kaydiso baararka badan oo aan meesha lagu shaqeeysto ku lumin. Waayo, AutoCAD, ka version doortay 2009 Ribbon ah, taas oo la mid ah ka mid ah Microsoft Office, taas oo fari sii raaciyaa xaallad ee bar ka siman kor ku xusan.
Microstation waxay go'aansatay in ay ka soo baxdo muraayad qumman oo u muuqata inay tahay xalka wanaagsan sababtoo ah way fududahay in lagu xakameeyo qaabka geed. Waxay u muuqataa in ay tahay fikrad aad u guulaysatay oo isbeddel yar oo xoog leh, waxay leedahay wax la mid ah qaabka ay ku dhisan tahay AutoCAD Civil 3D.
Sida loo arko
Mashruucu waa mid waxtar leh marka la eego sida loo dalbado astaanta, burburo iyo xitaa jiidato meel kasta oo shaashadda ah. Si loo hawlgaliyo si sahlan, waxay la xidhiidhaan warqad, sida marka la riixo kumbuyuutarka ay ku muuqdaan midigta ... si fudud, ka hor intaanad riixin badhanka oo aad sugto si aad u ballaadhiso.
Kadibna waxaa jira habab hore loo asaasay sida Madaniga 3D, taas oo ku xiran codsiyada la rakibay waxaad dooran kartaa qalabyada la xiriira hawlaha caadiga ah. Ogsoonow in haysashada Geopack lagu rakibay, waxaan dooran karaa faallo leh amarrada i xiiseynaya sida:
Dhab ahaantii waxay ku cabeen marijuana qaabka Nederlandka, sababtoo ah ficilku waa mid aad u fiican, liddi ku ah kii hore ee ahaa lagama maarmaanka u ahaa inuu raadiyo qalabka wax lagu qoro ama qorista amarrada furaha.
Howlaha barbaradka waxaa lagu dhejin karaa ugu yaraan saddex doorasho, kuwaa waxaa lagu qeexay "goobaha shaqo / doorbidka / hawlgalka wareega". Waxaad sidoo kale qeexi kartaa cabbirka nambarka inta u dhaxaysa yaryar, dhexdhexaad ama weyn; xalka wanaagsan ee indhaheenna ama xajmiga miisaanka hoos u dhaca.
Dialog. Iyadoo tanina, foomka hore waa la hayaa, ama ugu yaraan sidii loo qabtay XM, laga bilaabo baararka asaasiga ah ee lagu soo bandhigi karo qalabka la xidhiidha. Habka V8 markaa, tan iyo markii aan arko in dad badan oo aan arkay XM weli.
Sanduuqa qalabka. Tani waa qaabka aan ku tusay kor.
Ra'yiga. Iyada oo bedelkeedan, baararka ayaa ku dhegaya geeska ra'yiga, xiiso leh sababtoo ah waxay kaydisaa boos laakiin weli kama helin caqli-galnimada oo dhan, waxaana qabaa inay noqon karto mid adag.
Waa xalka wanaagsan ee lagu fulinayo amarrada, maaddaama aragtida hore ay u muuqato mid wanaagsan marka loo eego shaqeynta.
Waxaan u soo jeedin aad isku daydo, xitaa waxaa suurtagal ah in ay doortaan button ku haboon in toolbar la soo bandhigay sida bar dabacsan, iyo dabcan si aad u wanaagsan in lagu soo bandhigi karaa sida guddi, ama walxood. Guryahani waxay noqon karaan kuwo madaxbannaan, barbaarin, sidoo kale waxay arki karaan ikhtiyaarka si loogu dabaqo qaabka dhammaan baararka.
In muddo gaaban, hal-abuurka aad u wanaagsan laakiin Bentley suuq doonaa mid aad u xoog wax soo saarka sababtoo ah sida aynu ognahay, dadka isticmaala badan way adag yihiin si ay u haajiraan, ma sababtoo ah waxay doonayaan in ay qaataan version cusub laakiin sababtoo ah waxay dareemaan ku faraxsan yahay wixii ay hore u qabto (ama waxa lacag badan si ay u burcadnimada ku naxariis leh).
Waqtigan xaadirka ah waxaan arkay dadka oo isticmaalaya Microstation J, xitaa Microstation SE ... waxayna jecel yihiin !!! Sidaas dhexeeya V8, XM iyo V8i aan ku yeelan karto xaaladda ka mid ah macaamiisha adag in la beddelo oo keliya interface cusub, haddii barnaamijka aad weli wadista qaabka V8 isku waxaa la hirgeliyey muddo ka badan 6 sano oo u haajiraan oo aan Els ah ka dhignaan doontaa kharashka dheeraad ah.
Isbeddelada ka baxsan interface ayaa dib loo arki doonaa, sababtoo ah hadda waxaan ku soo laabanayaa dalxiis iyo iskuxirayaasha wirelesska ayaa niyadjabsan. Waxaan kuu sheegayaa, waxaan ku rakibay V8i Acer netbook mini... cajiib ah ayaa si fiican u shaqeeya oo waxay xallisaa waalidkeyga habka socdaalka, kaliya waa inaad qeexdaa cabbirka cabbirka yar yar sababtoo ah ma haysto meel bannaan.
Post Previous«Previous From Excel ilaa AutoCAD, marna ma fududa
Post Next Xayaysiiska kuwa waaweyn ee GeoNext »
Hal Jawaab u Jawaab "Microstation V8i: Hagaajinta Hawlaha"
Diprolam isagu wuxuu leeyahay:
Hagaag, microstation waa mid gaabis ah. Waxaa run ahaantii ma aha in uu jiro iska caabin ah in la beddelo, waxa dhaca waa in ay tahay mStation qaab aad u macquul ah in amarrada ay. Autocad aad ayuu uga sareeyaa dhinacyo badan. Xitaa iyada oo version 2011. Ma rabaan inay isbedelaan maxaa yeelay waxaa jira qalab badan oo ka maqan Mstation. Waqti badan ayaa lumay doorasho ikhtiyaar ah, oo leh tallaabooyin ku celceliya in autocad aysan dhicin. khasaaro kale waa barnaamij ee VBA, AutoLISP, DCL mid fudud ilaa xad in Autocad, laakiin MStation waa madax xanuun iyo aysan haysanin awood buuxda. The maamulka 3D 2011 Autocad Rowan waa meelaha ka xoogbadan, walxaha 3D, views iwm
Mstation wuu ka yar yahay qaabkiisa marka loo eego autocad, laakiin ma badbaadiyo qaababka sawirada, sida miisaanka badan, xaqiraadda iwm. Waa inaad had iyo jeer isku hagaajisaa macluumaadka isbeddelka iyo autocad ee aan dhicin.
Ma jiro wax REFEDIT ah oo lagu xakameynayo qaybaha (unugyada mstation) waqtiga dhabta ah. Ma jiro baarlamaan, Dynamic Blocks, Insert Tabeelo, Shaxda Dhoofinta ee Excel, Xogta Gaarka ah, 3D Navigation Cube, GIZMO 3D iyo wixii la mid ah ... Waxay caajisey Mstation.
Iyada oo barnaamijka la dhigi karo sawiro aad u dhakhso badan, 20 marar ka badan Mstation iyo furayaasha 2 ama 3 kaliya. Waxaad sidoo kale si wada jir ah ula wadaagi kartaa EXCEL, sida dhererka xariiqda, miisaanka, dhumucda, qoraalka, qoraalada, ku dhawaad ​​dhammaan macluumaadka hay'adaha waa la dhoofin karaa.
Caawimadu aad ayay u yar tahay Mstation. Maqaalkani maaha wax farsamooyin ah: Autocad waxay leedahay sharaxaad waxkasta oo muujineysa dhamaan mawduucyada la xiriira, barashada fiidiyowga, doorsoomayaasha, amarrada, tusaalooyinka, codsiyada, xiriirinta webka, iwm. Weligay dhib ma qabo fahamka waxa amarka ah ee xitaa ku jira buugga barnaamijka.
Mstation waa koodh. Waxaan kaliya u adeegsanayaa sababtoo ah macmiilku wuxuu weydiisanayaa, laakiin marka ay shaqo badan tahay waxaan doorbidaa Autocad.